यस्तो छ २२ वर्षीया सहचालक उषा सापकोटाको मार्मिक कहानी [नालीबेलीसहित] – Rapti Khabar
भदौ ४, काठमाडौं । ‘पढ्ने छाँट देखिएन, अब खलासी हुन पनि नसुहाउने भइस्।’ पढाइमा कमजोर छोराछोरीलाई धेरै आमाबाबु यसै भन्दै गाली गर्छन्। यो खबर समिक्षा अधिकारीले सेतोपाटी आनलाइनका लागि तयार पारेकी हुन्।
अरूभन्दा भिन्नै बाटो हिँड्न मन गर्ने र सबै कामलाई इज्जतले हेर्ने उषा साझा बसकी कान्छी सहचालक हुन्। यात्रुलाई गन्तव्यमा ओराल्दै उनी आफ्नै गन्तव्य तय गरिरहेकी छन्। *****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
लकडाउनअघि लगनखेल–नयाँ बसपार्क रूटमा मैले उनलाई बारम्बार देखेकी थिएँ। कति दिन उनकै बस चढेर फरक-फरक गन्तव्यमा झरेकी थिएँ। विनम्र भावमा सबैलाई मिलेर बस्न लगाउने उनको व्यवस्थापकीय क्षमता गजबकै लाग्थ्यो। एक-दुई दिन भेटिने यात्रुसँग मिठो बोल्नुपर्ने मान्यता राख्छिन् उनी। *****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
हामीले ग्यारेजमै बसेर कुराकानी गर्‍यौं। बिहीबारबाट निषेधाज्ञा सुरू हुनुअघि महामारीको त्रासमा सडकमा निस्केकी उनी के सोच्दी हुन्?*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
लजालु स्वभावकी उषा खुलेरै बोल्न थालिन्। सोचेभन्दा नितान्त भिन्न रहेछ उनको कथा। एउटी युवतीको मनभित्र साझाको सहचालक हुँदै चालक बन्ने सपना हुर्किइरहेको छ भन्दा सुरूमा पत्याउनै सकिनँ।*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
कोरोनाले पुर्‍याएको क्षतिको हिसाब राखिसक्नु छैन। यही महामारी पोहोर मात्रै आउँथ्यो भने उषाको परिवारमा ठूलै संकट आउँथ्यो। यतिबेला बहिनीको समेत कमाइ थपिएपछि उनको पाँच जनाको परिवार महामारीबीच पनि सजिलै पालिएको छ। भारतमा बुवाको काम चलिरहँदा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको उषा बताउँछिन्।*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
‘यसपालि सानो गाडीको लाइसेन्स निकाल्ने योजना थियो, पूरा हुने देखिएन,’ उषा योजनाबारे बताउँछिन्, ‘अहिले सानो गाडीको लिन पाए छिट्टै ठूलो गाडीको पनि लिन पाइन्थ्यो। जति ढिला भयो, त्यति पछाडि पर्छु भन्ने डर छ।’*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
उनी थप्छिन्, ‘यो वर्ष ब्याचलर भर्ना हुनुपर्ला भनेको, कलेज कहिले खुल्छ नै टुंगो भएन।’ थप काम सुरू गर्ने मौका नमिले पनि भइरहेको कामलाई राम्रै गरी सम्हालेकी छन् उनले।
साझामा सहचालक भएपछि उनलाई अरू जागिरले लोभ्याएको छैन।*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
‘घरमा कुरा गर्दा खलासी काम त हुँदैन भन्नुभएको थियो। मलाई नै इच्छा लागेर आएकी हुँ,’ उषा सुनाउँछिन्, ‘केही नभए पनि अनुभव हुन्छ भनेर आएँ। अहिले सोच्दा ठीक गरेँ जस्तो लाग्छ। सधैं निद्रा लाग्ने काम के गर्नू! यहाँ त नयाँ-नयाँ मान्छेसँग बोल्न पाइन्छ।’*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****
‘मैले साझामा राम्रो हुने देखेर प्रस्ताव गरेकी थिएँ। उनलाई लाज लाग्यो। मान्छेले के भन्लान् भन्ने सोचेर मलाई नै खिस्याएझैं गरिन्,’ उषा निर्धक्क भन्छिन्, ‘काम गरेर खान पनि लाज हुन्छ र! कामलाई इज्जत गरे पो कामले इज्जत दिन्छ।’*****तलको भिडियो हेर्नुहोस****